आफ्नै फोटोशुटले जेलको यात्रा ! आखिर ती मोडलले कस्ता तस्वीर खिचाइन् ? हेर्नुहोस् तस्वीर - Sidha News
आफ्नै फोटोशुटले जेलको यात्रा ! आखिर ती मोडलले कस्ता तस्वीर खिचाइन् ? हेर्नुहोस् तस्वीर
इजिप्टमा फोटोशुटका कारण एक मोडल र उनको फोटो खिच्ने फोटोग्राफर जेल जानुपरेको छ । यी मोडलका फोटोहरु सामाजिक संजालमार्फत सार्वजनिक भएपछि इजिप्टमा बहस सृजना भएको छ । इजिप्टको मिडियाले यी मोडलका तस्वीरलाई ‘उत्तेजक र आपत्तिजनक’ भनेपछि सामाजिक संजाल विभाजित भएको छ । केहीले यी मोडल र फोटोग्राफरको आलोचना गरेका छन् भने केहीले इजिप्टको प्रशासनको आलोचना गरेका छन् ।
मिडिल इस्ट आइका अनुसार उनीहरुलाई प्रशासनले सोमबार पक्राउ गरेको थियो । एक दिन हिरासतमा राखेर उनीहरुलाई मंगलबार छाडिएको छ तर उनीहरुको रिहाइ भए पनि बहस भने चर्किएको छ । फोटोग्राफर हौसम मोहम्मदले खिचेका तस्वीरहरुमा मोडल सलमा अल शिमी फरोहजस्ता देखिने परम्परागत गहना र घुँडामाथिसम्मको कपडामा देखिएकी छिन् । उनका तस्वीरहरु राजधानी कायरोबाट ३० किलोमिटर टाढा रहेको साकारा नेक्रोपोलिस क्षेत्रमा पिरामिडको पृष्ठभूमिमा खिचिएका छन् ।
एक न्यायिक स्रोतले मिडिल इस्ट आइलाई बताएअनुसार यी दुईलाई बिना अनुमति साकारा पुरातात्विक क्षेत्रमा फोटोशुट गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो । उनीहरुलाई ५ सय इजिप्सियन पाउण्ड धरौटीमा छाडिएको छ । उनीहरुविरुद्धको मुद्दा भने जारी रहनेछ । राज्य नियन्त्रित अखबार अकबर अल योमले मंगलबार लेखेअनुसार शिमीलाई अदालत उपस्थित गराइएको थियो र उनले आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप अस्वीकार गरेकी छिन् । उनले आफ्नो उद्देश्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नु भएको बताएकी छिन् । उनले पुरातात्विक क्षेत्रमा बिना अनुमति फोटो खिच्न नपाइने आफूलाई थाहा नभएको बताएकी छिन् ।
संक्रमितको मनोबल बढाउन आइसोलेसन सेन्टरमा नाचगान (फोटो फिचर)
यसरी मनाईयो १४औँ गणतन्त्र दिवस (फोटोफिचर)
ट्यांकीमा छैन पानी, हात धुने कसरी ? (फोटो फिचर)
नेपाली सेलिब्रेटीहरुले यसरी मनाए भाईटिका (फोटो सहित)
यस्तो देखियो बिहेपछि प्रियंका–आयुष्मानको पहिलो दशैं
यस्तो रह्यो कलाकारको दशैं (फोटोफिचर)
खुलामञ्चमा सर्वसाधारणलाई दसैँको टीका(फाेटाे)
सरकारविरुद्ध माइतीघरमा २२ दलको प्रदर्शन (फोटो फिचर)